रेल आएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने – कामभन्दा हल्ला धेरै भयो – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रेल आएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने – कामभन्दा हल्ला धेरै भयो
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दिल्ली जाँदा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र भारतबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो ।
भारतले दिने भनेको सात अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा चलाउन नेपाल सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल ल्याएको छ । शुक्रबार जनकपुरमा रेल आएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादव भने– कामभन्दा हल्ला धेरै भयो।
भारत या तेस्रो देशसँग विकास निर्माणका विभिन्न सम्झौता हुन्छन्, तर हाम्रोमा राजनीतिक उतारचढावले गर्दा सम्झौता समयमा अघि बढ्दैनन् । हामी फलोअप पनि गर्दैनौँ । हामी भारतलाई दोष दिन्छौँ, उनीहरू पनि ढिलाइ गिरिदिन्छन् । रेलमार्ग विस्तारको कुरा अहिले प्रचार गरिएकोजस्तो मात्रै होइन ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्वाचित भएर ०४८ मा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको विषय हो रेलमार्गको विस्तार । तर, हाम्रै कमजोरीले गर्दा समयमा काम हुन सकेन । ०४८ सालपछि अहिले आएर थोरै मात्रै काम भएको छ । तर, अहिले जति काम भएको छ यो पर्याप्त होइन ।
सरकार परिवर्तन भइरहने र भारतसँग सम्झौता भइरहने, तर समयमा काम अघि नबढ्ने हुँदै आएको छ । हुलाकी राजमार्गको अवस्था यस्तै छ । कुरा हुने काम नहुने यो सधैँको रोग हो । जहाँसम्म रेलमार्गको कुरा छ– नेपालको काठ भारतमा लान अंग्रेजहरूले राणाकालमै नेपालसम्म रेल ल्याएका थिए । रक्सौल र बर्दियाबाट पनि काठ लाने गरेको सुनिथ्यो ।
म राष्ट्रपति हुँदा भारत भ्रमणमा जाँदा पाँचवटा नाकामा रेलमार्ग विस्तारको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिखेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, सात वर्षमा सातवटा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेन । पहिलेको सम्झौतामा अहिले हल्लाखल्ला नै बढी भयो । के भइरहेको छ भन्ने फिल्डमा गएर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । अहिले हल्लीखल्ली भएको जस्तो यथार्थ होइन ।
रेलको विषयमा ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि बढाएको निरन्तरता मात्र हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा रेलमार्ग विस्तारको सम्झौता गरेपछिको निरन्तरताका विषय हुन् । जुन समयक्रममा उठ्दै–सेलाउँदै आएको छ । जनकपुरदेखि कुर्था, कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म गएको छ कि छैन ? गत वैशाखमा जाँदा कुर्थासम्म काम भएको भन्ने सुनेको थिएँ ।
कुर्थाभन्दा माथिबाट मोडिएर जाँदा बिजलपुराको स्टेसन हुन्छ । यता बर्दिबासतिरको त कुरै छोडौँ । कामभन्दा हल्ला बढी गर्ने प्रचलन छ । रेल आयो भनिए पनि यसको नियमित सञ्चालनमा जनशक्ति अभाव देखाइँदै छ । भारतले ३०–४० जना टेक्निकल मान्छे दिएको भन्ने छ । तर, यहाँ अढाई सयलाई भर्ना गर्न खोजिँदै छ । एकजनाले काम गर्नुपर्नेमा ६० जना भर्ना गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम हुँदै छ । रेल्वे बोर्डमा आफ्नो मान्छे राखेर मनोमानी गर्न खोजिँदै छ ।
भारतले जनकपुरलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मैले सहयोग सबै क्षेत्रलाई गर्नुस् भनेको थिएँ । म भारत जाँदा हेटौँडामा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, वीरगन्जमा सभाहलको सम्झौता भएको थियो । जनकपुरमा मात्रै सहयोग माग्न सक्थेँ । तर, म ओलीजी (प्रधानमन्त्री केपी ओली) जस्तो थिइनँ । सबैतिर विकास होस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।
काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको महाँकाल मन्दिरको सिँगारपटार गर्न पटकपटक आग्रह गरेँ । तर, सुधारेनन् । सबैको आँखा पर्ने सिंहदरबारअगाडिको भद्रकाली मन्दिरको हालत यस्तै भयो । सेनाले गरेको अलिअलि सिँगारपटारले यो मन्दिर बाँचेको छ ।
तर, सरकारको मुख्यालय सिंहदरबारकै सामुन्नेको मन्दिर सुधार गर्न चाहेनन् । बरु झापामा भ्युटावर बनाउने चाहना सरकारलाई हुन्छ । झापाको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्ने कि टावर बनाउने ? भ्यु हेर्न त पहाडको टाकुरमा पो बनाउने त । जहाँ पर्यटकहरूले आनन्द लिन सक्ने थिए ।
भारतको कामगराइको प्रवृत्तिलाई यहाँ गाली गरिन्छ । उनीहरू पनि सम्झौता गर्ने, तर काम नगर्ने गर्छन् । नदीनाला पनि होल्ड गर्ने, तर काम नगर्ने उनीहरूको शैली छ । हाम्रोमा एउटाको वेलामा सम्झौता हुन्छ । तर, अर्को सरकारले अघि बढाउँदैन ।
जुन सरकारको पालामा गरेको सम्झौता भए पनि अर्को सरकारको पालामा अघि बढाउनुपर्ने हो । तर, अर्को मन्त्रीले पहिलेको काम गर्दैनन् । अर्को काम हुनै दिँदैनन् । एउटा मन्त्रीले कुनै जिल्लामा लगेको योजनालाई अर्को मन्त्रीले पूरा हुनै नदिने प्रवृत्ति छ । अर्कोले ल्याएको योजनाले आफू निर्वाचनमा हार्छु भन्ने पथ्र्यो । यस्तो प्रवृत्ति एउटामा होइन सबै पार्टीमा छ । अर्कोले जस लिन्छ भन्ने भएपछि राष्ट्रको भलाइ हुने काममा पनि सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । नयाँ पत्रिका
सेनाको कुटाइबाट मृ’त्यु भएका राजकुमारको श’व पोस्टमार्टम गर्न काठमाडौं पठाइयो !
सरकार भन्छ – भ्याट बुझाऊ , व्यवसायी भन्छन् – सकिँदैन
हिजो घटेको सुनको मूल्य आज भने सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो !
नेपालमा आज एकैदिन ७ जनाको कोरोनाबाट गयो ज्यान, ज्यान गुमाउनेको संख्या १६४ पुग्यो